Lọ ọrụ akụrụngwa | Ndị na-emepụta ngwa ọrụ China, ndị na-eweta ngwaahịa
Rotary Single Cylinder Ihicha igwe A na-ejikarị ya eme ihe na akụrụngwa dịka ciment, nke m, ihe owuwu, kemịkalụ, nri, nri fatịlaịza, wdg.
The rotary drum oyi igwe bụ ka e mere na-eji na organic fatịlaịza mmepụta akara ma ọ bụ NPK compound fatịlaịza mmepụta akara rụchaa zuru fatịlaịza n'ichepụta usoro. NaFatịlaịza Pellets Jụrụ Igwe -emekari eso ihicha usoro iji belata mmiri ma dịkwuo urughuru ike mgbe mbenata urughuru okpomọkụ.
Na Na-adọnye & Ngwa Nri a na-eji ya dị ka ihe akụrụngwa hopper n'oge nhazi ihe ma ọ dabara adaba maka ihe eji eji ụgbọ ala forklift. The edo na-aga n'ihu orùrù bụghị nanị na-azọpụta ọrụ na-eri, kamakwa rụọ ọrụ arụmọrụ.
Na Multiple Hoppers Stinye Weigh Static Organic & Onyinye Fatịlaịza batch Machibụ kachasị dị mma maka ịgwakọta, ịkọ nri na nri nke ụdị 3-8. Usoro kọmputa na-ejikwa kọmputa arụ ọrụ na-akpaghị aka. A na-eji valvụ ahụ na-eme ihe iji chịkwaa ọkọnọ ihe dị na nnukwu igbe. A na-agwakọta ihe ahụ na igwe agwakọta ma zipụ ya na akpaghị aka site na onye na-ebu belt.
Na Diset Vetikal Gwakọta Nrier Igwe A na-eji ya eri nri akụrụngwa karịa ihe abụọ na usoro mmepụta fatịlaịza. Ọ nwere njirimara nke kọmpat, nhazi nri na ọdịdị mara mma. E nwere ihe karịrị abụọ ihapu ọdụ ụgbọ mmiri na ala nke diski, nke na-eme ebutu ezi adaba.
Na Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator a na-ejikarị eme ka mmiri si na ihe mkpofu, dị ka nsị anụmanụ, nri nri, sludge, biogas residue liquid wdg Chicken, ehi, ịnyịnya na ụdị ugbo kpụ ọkụ n'ọnụ niile maka nsị anụmanụ, ndị na-ebugharị, dregs, starch dregs, sauce dregs, egbu osisi na ndị ọzọ na elu ịta nke organic nsị nkewa.
Igwe a enweghị ike idozi nsogbu ndị nsị na-emetọ gburugburu ebe obibi, kamakwa ọ nwere ike ịba uru dị elu nke akụ na ụba.
Organic Fatịlaịza Now Polishing Machine eji ya maka ịkpụzi usoro dị iche iche fatịlaịza na bio-organic fatịlaịza mgbe granulating. Ọ nwere ike na-kpam kpam ekwekọghị na ọhụrụ organic fatịlaịza granulator, ewepụghị anwụ pịa granulator na mgbanaka anwụ granulator. Enwere ike ịhọrọ igwe a ga - ahọrọ diski abụọ ma ọ bụ atọ. Mgbe granulu na-egbu maramara, na gburugburu na-eji ire ụtọ granular okokụre ngwaahịa na-atara site na mmepụta.
Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine etinyere akpaka quantitative nkwakọ na fatịlaịza n'ichepụta. The onwe ha erikpu usoro na elu erikpu ziri ezi na ngwa ngwa ọsọ site na iji Toledo erikpu mmetụta, dum erikpu usoro na-akpaghị aka na-achịkwa kọmputa.
Na Rubber echebe ebu Machine ike ga-eji ibufe ma nnukwu ihe na okokụre ngwaahịa. Enwekwara ike ịrụ ọrụ na usoro mmepụta ihe dị iche iche, ma mepụta usoro mmepụta rhythmic.